CAS 13103-34-9 ထိုးဆေးသုံးနိုင်သော Anabolic Steroids ဟော်မုန်းများ Boldenone Undecylenate Powder
ကုန်ကြမ်း Boldenone Undecylenate Equipoise အရည်အရင်းအမြစ်
အသုံးပြုမှု-Boldenone Undecylenate (Equipoise) သည် အသုံးပြုသူများအား စက်ဝန်းအတွင်း နှေးကွေးသော်လည်း တည်ငြိမ်သော အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော စတီးရွိုက်ဒြပ်ပေါင်းဖြစ်သည်။Testosterone မှ အီစထရိုဂျင်သို့ ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပွားသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများအကြောင်း အနည်းငယ်မျှသော အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူ ၎င်းသည် အတော်အတန် ဘေးကင်းပါသည်။
Equipoise ကို ဘယ်လိုသုံးမလဲ။ဘယ်လိုဆေးတွေသုံးရမလဲ
ခံနိုင်ရည်၊ ကြွက်သားထုထည်နှင့် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ သွေးနီဥဆဲလ်များ ထုတ်လုပ်မှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် Equipoise ကို အားကစားသမားများနှင့် ကာယဗလသမားများက အသုံးပြုကြသည်။များပြားသော စက်ဝန်းများအတွင်း နှေးကွေးသော်လည်း တည်ငြိမ်သော အမြတ်များကို ပေးဆောင်ခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံးလူသိများသည် ( အများအားဖြင့် EQgains )။EQ ကို တစ်ပတ်လျှင် 200mg မှ 600mg မှ 12 ပတ်အထိ ကြာရှည်စွာ သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း၊ equipoise သည် powerlifters များအကြားအနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်လာပြီး deca durabolin အတွက်အကောင်းဆုံးအစားထိုးမှုအဖြစ်နည်းပြများကယူဆကြသည်။ဒါက အဓိကအားဖြင့် deca ရဲ့ ဆိုးရွားတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေမရှိဘဲ equipoise ပေါ်နေချိန်မှာ တွေ့ကြုံရတဲ့ ကြွက်သားထုထည်နဲ့ ခွန်အားရရှိမှုတွေကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင် EQ သည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်း သွေးလည်ပတ်မှုအပေါ် အပြုသဘောဆောင်သော သက်ရောက်မှုရှိသည်။ပြင်းထန်သော လေ့ကျင့်ခန်းများအတွင်း ကြွက်သားများအထိ သွေးအများဆုံးလွှမ်းနိုင်စေခြင်း။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုတွင်၊ equipoise သည် erythropoietin (EPO) လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အချက်ကိုမြှင့်တင်နိုင်ပြီး၊ တစ်နည်းအားဖြင့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီကြီးထွားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးကာ သွေးနီဥဆဲလ်များ တိုးပွားလာစေသည်။သွေးနီဥများ ပိုများလာခြင်း ဆိုသည်မှာ ဟေမိုဂလိုဘင် ပိုများပြီး အောက်ဆီဂျင် သယ်ဆောင်နိုင်စွမ်း မြင့်မားသည်။၎င်း၏အစွမ်းထက်သော mineralocorticoid ဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် EQ သည် electrolyte အဆင့်ဆင့်သို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်သည်။
အမျိုးသားများအတွက် ပျမ်းမျှဆေးပမာဏသည် တစ်ပတ်လျှင် 400-600mgs ဖြစ်သည်၊ သို့သော် စက်ဝိုင်းအကူအညီများအသုံးပြုနေသမျှကာလပတ်လုံး အမျိုးသားများသည် တစ်ပတ်လျှင် 1000mgs အထိ တက်သည်ကို တွေ့ဖူးသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် ပျမ်းမျှဆေးပမာဏမှာ တစ်ပတ်လျှင် 25-50mgs ဖြစ်သော်လည်း အလွန်သတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ တွေ့ပါက EQ ကို ရပ်ဆိုင်းပါ သို့မဟုတ် သောက်သုံးမှု လျှော့ပါ။
Equipoise Cycles အချို့
Equipoise သည် အလွန်စွယ်စုံရသောကြောင့် ဖြတ်တောက်ခြင်း နှင့် ကြီးမားသော စက်ဝန်းနှစ်ခုလုံးအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ဖြတ်တောက်သည့် စက်ဝန်းအတွင်း ၎င်းကို trenbolone နှင့် winstrol တို့ဖြင့် တွဲထားသည်။ကြီးမားသောစက်ဝန်းများအတွင်း EQ သည် dianabol နှင့် testosterone (cypionate သို့မဟုတ် enanthate) ဖြင့်စုထားသည်။သင်၏ EQ လည်ပတ်မှုနှင့်အတူ စက်ဝိုင်းအကူအညီများကို အသုံးပြုရန် စိတ်ကူးကောင်းပါသည်၊ cardarine (GW-501516) နှင့် N2Guard နှစ်မျိုးလုံးသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ထို့အပြင်၊ boldenone နှင့်အတူ aromasin သို့မဟုတ် arimidex ကဲ့သို့သော aromatase inhibitor (AI) လိုအပ်သည်။
1.တင်ပို့ရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်များအတွက် COA လက်မှတ်နှင့် တရားဝင် PI ကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
2. ကျွန်ုပ်တို့သည် ကိုယ်ပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့် စက်ရုံရှိ ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး အရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကို စက်ရုံစျေးနှုန်းဖြင့် ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသည်။
3. ကုန်ပစ္စည်းများကိုငွေပေးချေပြီးနောက် 24 နာရီအတွင်းတင်ပို့နိုင်သည်။ခြေရာခံနံပါတ်ရရှိနိုင်သည်၊ ပုံသေဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် သင့်ထံ ဆက်သွယ်ရန်အတွက် 7x24 နာရီဖြစ်သည်။
4. လုံခြုံပြီး သတိရှိစွာ ပို့ဆောင်ခြင်း။DHL/UPS/TNT/FedEx/SF-express ကဲ့သို့သော သင့်ရွေးချယ်မှုအတွက် အမျိုးမျိုးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ။
5.Customs pass နှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုနှုန်း ≥99%။
6. အရောင်းရဆုံး ထုတ်ကုန်များအတွက် လွှဲပြောင်းရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် စတော့ခ်ရှိသည်။
7. ကုန်ပစ္စည်းများ မပေးပို့မီ ကျွန်ုပ်တို့၏ အရည်အသွေးဌာနမှ တင်းကြပ်စွာ စစ်ဆေးမှုဖြစ်ပြီး၊ (SGS/ CTI/ ITS) ကဲ့သို့သော တတိယစမ်းသပ်မှုအဖွဲ့အစည်းကို လာရောက်စစ်ဆေးမေးမြန်းနိုင်သည် (SGS/ CTI/ ITS) ကို ကျွန်ုပ်တို့၏အတည်ပြုချက်ရရှိမှသာ သင့်ထံပေးပို့မည်ဖြစ်ပါသည်။
8.ကျွန်ုပ်တို့တွင် မတူညီသော နိုင်ငံများသို့ စာပို့စာပို့များရှိသည်။
ကျေးဇူးပြု၍ မည်သည့်ထုတ်ကုန်နှင့် လိုအပ်သော ပမာဏကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါ။
ယခင်- ကြွက်သားကြီးထွားမှု ဟော်မုန်း Drost E Master 100% အာမခံချက်
နောက်တစ်ခု: အမြန်တင်ပို့မှုဖြင့် ထိပ်တန်း Notch Boldenone Undecylenate ကုန်ကြမ်း Steroid တင်သွင်းသူ